Faah faahin:- Dil ka dhacay deegaanka Doonweyne iyo ninka dilkaasi ka dambeeyay oo la qabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dil ka dhacay deegaanka Doonweyne iyo ninka dilkaasi ka dambeeyay oo la qabtay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Doonweyne oo qiyaastii 10-km u jirta degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in dil foolxun uu halkaasi ka dhacay, kadib markii oday waayeel ah oo da’diisa lagu qiyaasay 80 jir uu dilay walaashiis oo 82 sano jir aheyd.
Odaygaan dilka geystay oo lagu magacaabo Maxamed Muuse ayaa la sheegayaa in isaga iyo walaashiis oo lagu magacaabi jiray Faadumo Muuse uu soo kala dhex-galay muran dhul beereed ah oo uu kaga dhintay aabahooda.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in dilka haweeneydaasi uu yimid, kadib markii ay haweeneydaasi si xoog ah ku gashay dhul beereedka muranka kala dhaxeeyay walaalkeed, kadibne uu walaalkeed halkaasi ku dilay.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Afgooye ayaa la sheegayaa in markii dambe ay gacanta kusoo dhigeen odaygaan dilka u geystay walaashiis, waxaana la sheegay in haatan loo soo gudbiyay xarunta hay’adda dambi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo maxkamad loo sii gudbin doonno.
Dhacdadaan argagaxa leh oo ka dhacday deegaanka Doonweyne ayaa si weyn waxaa uga wada naxay dadka halkaasi ku nool, waxayna dadkaasi weli si weyn u hadal haayaan odaygaan 80 jirka ah ee dilay walaashiis 82 jirka ahayd oo labadoodaba si fiican looga wada garanaayay deegaankaas.
Maxamed Muuse waa odayga 80 jirka ah ee dilka u geystay walaashiis Faadumo Muuse oo 82 jir ahayd